စံပယ်ပန်း: December 2012
အမျိုးသမီးများ အစားသင့်ဆုံးသော အကောင်းဆုံး အစားအစာ ၁၀ မျိုး
စိတ်ဖိစီးမှုများတာနဲ့ တခြားရောဂါတွေကို တားဆီးပေးပါတယ်။ ဥရောပ သုတေသီတွေက ချောကလက်အညိုကို တစ်နေ့ တစ်အောင်စခွဲနဲ့ နှစ်ပတ် စားပေးတာက စိတ်ဖိစီးမှုဟော်မုန်းဖြစ်တဲ့ ကော်တီစော ထွက်တာကို လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကော်တီစောက သွေးပေါင်တိုးစေပြီး စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ အဝလွန်တာ၊ နှလုံးရောဂါ စတာတွေကိုလည်း ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ကင်ဆာရောဂါကို တိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်တွေ ရရှိနိုင် ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို မှို တစ်အောင်စရဲ့ သုံးပုံတစ်ပုံ စားပေးပါက ရင်သား ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်ပွားတာကို ၆၄ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ တခြားသော လေ့လာသူတွေက ရင်သားကင်ဆာကို ဖြစ်စေတဲ့ အီစထရိုဂျင်ဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်ရာမှာ လိုအပ်တဲ့ ပရိုတင်းတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Aromatase ရဲ့ အာနိသင်ကို လျော့ကျစေပါတယ်။
နှလုံးရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အိုမီဂါ-၃ ဓာတ် ကြွယ်ဝတာကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုတွေကို လျော့နည်းစေပြီး နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာ မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သွေးခဲတာ၊ နှလုံး တိုက်ခိုက်ခံရတာ၊ လေဖြတ်တာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပြီး သွေးကြောတွေကို ပျော့ပျောင်း စေပါတယ်။ ဆာဒင်းငါး သုံးအောင်စ စားပါက တစ်ဒသမသုံး ဂရမ်ရှိတဲ့ အိုမီဂါ- ၃ ကို ရရှိပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်က အဆီပိုတွေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။ ထောပတ်သီးထဲမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ မပြည့်ဝဆီတွေ များစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဒီအဆီတွေက သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ကျအောင် စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုက သင်စားတဲ့ နေ့စဉ် အစားအစာတွေထဲက ကယ်လိုရီရဲ့ ၂၃ ရာခိုင်နှုန်းကို မပြည့်ဝဆီတွေသာ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားပေးပါက သင့်ဗိုက်က အဆီတွေကို လျှော့ချနိုင်ပြီး သင့်ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန်ကို ငါးပေါင်အထိ လျော့နည်းသွားစေတယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
မျက်ကြည်လွှာရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အသက်အရွယ် ရလာတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ မျက်ကြည်လွှာ ပျက်စီးတာနဲ့ မျက်စိတွင်းတိမ်ဖြစ်တာကြောင့် အမြင်အာရုံထိခိုက်တာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ လူတင်း၊ ဇီဇန်သင်းနဲ့ ဗီတာမင်စီဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ ငရုတ်ပွသီးက သင့်အမြင်အာရုံတွေ စူးရှစေဖို့ ထိန်းသိမ်းပေးပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ငရုတ်ပွသီး နှစ်ကြိမ် စားပေးပါက ဗီတာမင်စီအပြင် လူတင်း ၁၁၆ မိုက်ခရိုဂရမ်၊ ဇီဇန်သင်း ၅၆၂ မိုက်ခရိုဂရမ်ကို ရရှိစေပါတယ်။
၆။ အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီ
မျက်နှာပေါ်မှာရှိတဲ့ အရေးကြောင်းတွေကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ တရုတ် ပန်းကန်လုံး တစ်လုံးစာ အစိမ်းရောင် ပန်းဂေါ်ဖီပွင့်ကနေ ဗီတာမင်စီနဲ့ ဗီတာမင်အေ ဓာတ်တွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီက အရေပြားရဲ့ ကျုံ့နိုင် ဆန့်နိုင်တဲ့ အာနိသင်ကို ဖြစ်စေပြီး ကော်လဂျင် ထုတ်လုပ်မှုကို အားပေးပြီး ဗီတာမင်အေက ဆဲလ်အသေတွေ နေရာမှာ ဆဲလ်အသစ် ဖြစ်ပေါ်စေဖို့ အားပေးပါတယ်။
သွေးတိုး ကျစေပါတယ်။ အာလူး အရွယ်တော် တစ်လုံးကနေ ကယ်လိုရီ အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်ပြီး ငှက်ပျောသီး တစ်လုံးကနေ ရရှိနိုင်တဲ့ ပိုတက်စီယမ် ပမာဏထက် ပိုမို ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပိုတက်စီယမ်က နှလုံးရောဂါကို တိုက်ထုတ်နိုင်ပြီး သွေးတိုး ကျစေပါတယ်။
ကိုယ်ခံစွမ်းအား မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ အရသာချိုတဲ့ ပန်းသီး အရွယ်တော် တစ်လုံးမှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ကွာစန်တင်ဓာတ် ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဒီဓာတ်က ရောဂါပိုးတွေ မဝင်ရောက်နိုင်အောင် ခန္ဓာကိုယ် ခုခံကာကွယ်နိုင်စွမ်းအားကို မြှင့်တင်ပေးပါတယ်။ Appalachian State University ရဲ့ နှစ်ပတ်ကြာ လေ့လာခဲ့တဲ့ လေ့လာမှု တစ်ခုက ကွာစန်တင်ဓာတ် ပါအောင် စားသုံးသူတွေက မစားသုံးသူတွေထက် အသက်ရှူ လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားနှုန်း ၄၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အရိုးတွေကို သန်မာစေပြီး မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် မရှိတဲ့ ကလေးကို မွေးဖွားစေပါတယ်။ အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် ဖြစ်တဲ့ ဟင်းနုနယ်ရွက်ထဲမှာ ဗီတာမင်ကေ၊ ကယ်လ်စီယမ်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်ဓာတ်တွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အရိုးတွေကို သန်မာစေပါတယ်။ ဖောလိတ်နဲ့ ဗီတာမင်ဘီ ဓာတ်တွေက မွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် မရှိတဲ့ ကလေးကို မွေးဖွား စေပါတယ်။ ခွက်တစ်ခွက်စာကနေ ၇ ကယ်လိုရီ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
အရိုးပါး ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ကယ်လ်စီယမ် အပြည့်အဝ ရရှိနိုင်တာကြောင့် အရိုးပါးရောဂါ ဖြစ်ပွားမှုကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်။ ဒိန်ချဉ်နဲ့ အဆီ မပါဝင်တဲ့ နွားနို့ကို တစ်နေ့ သုံးကြိမ် သောက်ပေးပါ။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 12/17/2012 06:18:00 am0comments
16. F3 key (Search forafile orafolder) 17. ALT+ENTER (View the properties for the selected item) 18. ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program) 19. ALT+ENTER (Display the properties of the selected object) 20. ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window) 21. CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents opensimultaneou sly) 22. ALT+TAB (Switch between the open items) 23. ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened) 24. F6 key (Cycle through the screen elements inawindow or on the desktop) 25. F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer) 26. SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item) 27. ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window) 28. CTRL+ESC (Display the Start menu) 29. ALT+Underlined letter inamenu name (Display the corresponding menu) Underlined letter inacommand name on an open menu (Perform the corresponding command) 30. F10 key (Activate the menu bar in the active program) 31. RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or openasubmenu) 32. LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or closeasubmenu) 33. F5 key (Update the active window) 34. BACKSPACE (View the folder onelevel up in My Computer or Windows Explorer) 35. ESC (Cancel the current task) 36. SHIFT when you insertaCD-ROMinto the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing) Dialog Box - Keyboard Shortcuts 1. CTRL+TAB (Move forward through the tabs) 2. CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs) 3. TAB (Move forward through the options) 4. SHIFT+TAB (Move backward through the options) 5. ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option) 6. ENTER (Perform the command for the active option or button) 7. SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option isacheck box) 8. Arrow keys (Selectabutton if the active option isagroup of option buttons) 9. F1 key (Display Help) 10. F4 key (Display the items in the active list) 11. BACKSPACE (Openafolder one level up ifafolder is selected in the Save As or Open dialog box)
Microsoft Natural Keyboard Shortcuts 1. Windows Logo (Display or hide the Start menu) 2. Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box) 3. Windows Logo+D (Display the desktop) 4. Windows Logo+M (Minimize all of the windows) 5. Windows Logo+SHIFT+M (Restorethe minimized windows) 6. Windows Logo+E (Open My Computer) 7. Windows Logo+F (Search forafile orafolder) 8. CTRL+Windows Logo+F (Search for computers) 9. Windows Logo+F1 (Display Windows Help) 10. Windows Logo+ L (Lock the keyboard) 11. Windows Logo+R (Open the Run dialog box) 12. Windows Logo+U (Open Utility Manager) 13. Accessibility Keyboard Shortcuts 14. Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off) 15. Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off) 16. Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off) 17. SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off) 18. NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off) 19. Windows Logo +U (Open Utility Manager) 20. Windows Explorer Keyboard Shortcuts 21. END (Display the bottom of the active window) 22. HOME (Display the top of the active window) 23. NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder) 24. NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder) 25. NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder) 26. LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder) 27. RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder) Shortcut Keys for Character Map After you double-clickacharacter on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts: 1. RIGHT ARROW (Move to the rightor to the beginning of the next line) 2. LEFT ARROW (Move to the left orto the end of the previous line) 3. UP ARROW (Move up one row) 4. DOWN ARROW (Move down one row) 5. PAGE UP (Move up one screen atatime) 6. PAGE DOWN (Move down one screen atatime) 7. HOME (Move to the beginning of the line) 8. END (Move to the end of the line) 9. CTRL+HOME (Move to the first character) 10. CTRL+END (Move to the last character) 11. SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode whenacharacter is selected) Microsoft Management Console (MMC) Main Window Keyboard Shortcuts 1. CTRL+O (Openasaved console) 2. CTRL+N (Openanew console) 3. CTRL+S (Save the open console) 4. CTRL+M (Add or removeaconsole item) 5. CTRL+W (Openanew window) 6. F5 key (Update the content of all console windows) 7. ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu) 8. ALT+F4 (Close the console) 9. ALT+A (Display the Action menu) 10. ALT+V (Display the View menu) 11. ALT+F (Display the File menu) 12. ALT+O (Display the Favorites menu)
MMC Console Window Keyboard Shortcuts 1. CTRL+P (Print the current page or active pane) 2. ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window) 3. SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item) 4. F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item) 5. F5 key (Update the content of all console windows) 6. CTRL+F10 (Maximize the active console window) 7. CTRL+F5 (Restore the active console window) 8. ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for theselected item) 9. F2 key (Rename the selected item) 10. CTRL+F4 (Close the active console window. Whenaconsole has only one console window, this shortcut closes the console) Remote Desktop Connection Navigation 1. CTRL+ALT+END (Open the Microsoft Windows NT Security dialog box) 2. ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right) 3. ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left) 4. ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order) 5. ALT+HOME (Display the Start menu) 6. CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer betweenawindow andafull screen) 7. ALT+DELETE (Display the Windows menu) 8. CTRL+ALT+Minus sign (-) (Placeasnapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN onalocal computer.) 9. CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place asnapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboardand provide the same functionality aspressing ALT+PRINT SCREEN onalocal computer.)
Microsoft Internet Explorer Keyboard Shortcuts 1. CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box) 2. CTRL+E (Open the Search bar) 3. CTRL+F (Start the Find utility) 4. CTRL+H (Open the History bar) 5. CTRL+I (Open the Favorites bar) 6. CTRL+L (Open the Open dialog box) 7. CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address) 8. CTRL+O (Open the Open dialog box,the same as CTRL+L) 9. CTRL+P (Open the Print dialog box) 10. CTRL+R (Update the current Web )
Posted by ကြည်မြန်မာ at 12/17/2012 12:52:00 am0comments
ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ၏ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ.... တဲ့ ဗဟုသုတလေးပေါ့ ! ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး.. တနေရာကနေ မလာတာ ..သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ ကျွန်မအတွက်ရော.. အားလုံး သိရအောင်ဆိုပြီးေ တာ့ ! -------------------------------------------------------------------- ဟင်းသီးဟင်းရွက် များ၏ အင်္ဂလိပ် အခေါ်အဝေါ်များ..
Posted by ကြည်မြန်မာ at 12/16/2012 01:44:00 am0comments
Posted by ကြည်မြန်မာ at 12/14/2012 04:40:00 am0comments
လူ့ဘဝ၏ အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်းသို့သွားရာ လှေခါး (၃၀)
၄။ သူတစ်ပါး မကောင်းကြောင်း ဘယ်အခါမှ မပြောနှင့်။
၅။ မိမိဝင်ငွေနှင့် လောက်ငှအောင် သုံးစွဲပါ။
၇။ မူးယစ်စေသည့် အရာများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
၁၀။ လျှို့ဝှက်သင့်သည်ကို မပေါက်ကြားပါစေနှင့်။
၁၁။ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းခြင်းမွန်သည်သာ ဘဝ၏အောင်မြင်တိုးတက်ခြင်း ကိုဖြစ်စေသည်။
၁၂။ တတ်နိုင်ပါက ချေးငှားမှုအား ဘယ်သောအခါမှ မပြုပါနှင့်။
၁၃။ သင်၏ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ခြင်းသည် သင့်၏ကျေနပ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းအပေါ်မှာ မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
၁၄။ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် အလောသုံးဆယ်မပြုလုပ်သင့်။
၁၅။ သူတစ်ပါးအား ပြောဆိုရန်ရှိလျှင် ထိုသူ့မျက်နှာကို ကြည့်ရ်ျပြောပါ။
၁၆။ မယားတစ်ယောက်ကို လုပ်ကြွေးနိုင်မှ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာ ပြုသင့်ရာသည်။
၁၇။ ကြီးလာသည့်အခါ သုံးစွဲနိုင်ရန် ငယ်ရွယ်စဉ်က ချွေတာစုဆောင်းရာ၏။
၁၈။ အပေါ်ယံသာယာမှုကိုကြည့်၍ အပျော်အပါးများအားမလိုက်စားသင့်။
၁၉။သူတစ်ပါးတို့အားကူညီရာတွင် ကဲ့ရဲ့ ပြစ်တင်ရှုတ်ချမှုကိုဂရုမစိုက်သင့်။
၂၁။ မှန်မှန်ကန်ကန်နှင့်ကြိုးစားမှုကြောင့်တိုးတက်ခြင်းသည် ထိုက်တန်ေ အာင်မြင်ခြင်းဖြစ်၏။
၂၂။ ညအိပ်ယာဝင်သည့်အခါတစ်နေ့တာလုပ်ဆောင်ခဲ့သမျှကို ပြန်လည်သုံး သပ်ခြင်းသည်နောက်နေ့လုပ်ဆောင်ရမည့်အလုပ်အတွက် တိကျမှုကိုဖြစ်စေ၏။
၂၃။ သင့်အပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်မှလွဲရ်ျ သင့်အကျင့်စာရိတ္တကို ထိခိုက်စေ မည့်အကြောင်းမရှိနိင်။
၂၄။ အလုပ်တစ်ခုကို စဉ်းစားဆုံးဖြတ် သုံးသပ်ပြီးမှအကောင်အထည်ဖေါ်ရာ ၏။
၂၅။ အလုပ်နှင့်ဘယ်အခါမှ ကင်းကွားမှုမဖြစ်စေပဲ လက်များကိုအကျိုးရှိစွာ အသုံးချပါ။
၂၆။ ကိုယ့်အကျိုးသာကြည့်ပြီး သူတစ်ပါးအကျိုးမကြည့်သောသူများအား မိတ်ဆွေအဖြစ်မပြုသင့်။
၂၈။ သြဇာအားဏာရှိသူသော်ငြားလည်း ယုတ်မာရက်စက်လူမဆန်သူများ နှင့်ဝေးဝေးနေသင့်၏။
၂၉။ သူတော်မဟုတ်သူယုတ်တို့နှင့်ကင်းကင်းနေက ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်း သာရ၏။
၃၀။ ကိုယ့်အကျိုး သူ့အကျိုး မျှမျှတတဆောင်ရွက်ငြားက မိတ်ကောင်းသ ဟာပေါကြွယ်ပါ၏။
ကဲ....အဆွေတို့ရေ အထက်ပါ စည်းကမ်းချက်များ သင့်မှာရှိပြီးသားဖြစ်ပါ သလား မရှိသေးပါက သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည်ဟု ယုံကြည်ပါလျှင်ကျင့်သုံး သင့်သည်ထင်ပါသည်။အကုန်လုံးကိုယ်တိုင်ရေးသည်မဟုတ်သော်ငြားလည်း ပြင်ဆင်ဖြည့်စွပ်ထားပါသည်။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 12/11/2012 09:07:00 pm0comments
လောကကြီးမှာ လူဖြစ်ရတာခြင်းအတူတူ ဒီထဲကမှ မိန်းမသားဖြစ်ရတာခြင်း အတူတူ အောင်မြင်မှုမတူ ဘာကြောင့်များ အခြေနေတွေ ကွာခြားနေရတာ ပါလဲ။ အောင်မြင်ထင်ရှား မိန်းမသားတွေကတော့ အောက်ပါ အချက်အ လက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတာ သတိထားမိစေဖို့ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အောင်မြင်ထင်ရှားမိန်းမသားတိုင်းမှာ သူများထက်ထူးတဲ့ ဝီရိယကို ပိုင်ဆိုင် ထားကြတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ အချိန်တန်ရင် သူ့အလိုလို ဖြစ်သွားမှာ ဆိုတဲ့ စကားကို လုံးဝအယုံအကြည်မရှိတဲ့ မိန်းမသားများပေါ့။ သူတို့ဟာ သူတို့ လုပ်ဆောင်စရာရှိသမျှကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်တတ်ပြီး သူများထက်အရင် ဦးစွာပြီးစီးစေခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုကို ရယူတတ်ပါတယ်။
(၂) ကတိတစ်လုံး စကားတစ်ခွန်းကို တန်ဖိုးထားတတ်ကြတယ်
သူတို့ဟာ ပြောပြီးသားစကားတစ်ခွန်း ပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုအင်မတန်ဝန်လေး တတ်ကြပါတယ်။ ပေးပြီးသားကတိအတွက် ဖျက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ အ သက်သာ အသေခံချင်တော့တယ်ဆိုတဲ့ အစားမျိုးပေါ့။ အောင်မြင်ထင်ရှား မိန်းမသားများဟာ ဒီလို စကားတည်ခြင်း ကတိမြဲခြင်းတို့နဲ့ပဲ သူ့ပတ်ဝန်း ကျင်က ပြိုင်ဘက်တွေကို ကျော်လွှာအနိုင်ရသွားတတ်မြဲပါ။
(၃) ကိုယ်ကျင့်တရားကို တန်ဖိုးထားတယ်
ပုထုဇဉ်ဆိုတာကတော့ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ သဘာဝရှိကြတာချည်းပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်ထင်ရှား မိန်းမသားတွေကတော့ ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့စိတ်ကို သူတို့ရဲ့ ဟီရိသြတ္တပ တရားက ပြန်လည်ထိန်းချုပ်ပြီး ကြည့်လိုက်တာနဲ့ တည်ကြည်ခြင်း အပေါင်းစုလို့ သူတို့ရဲ့မြဲမြံတဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကြောင့် လူကြည်ညိုစရာ အလိုလိုဖြစ်နေတတ်တာ သူတို့ရဲ့ သဘာဝပါ။
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်မရှိရင် အောင်မြင်ပေမယ့် မထင်ရှားဘူး၊ ထင်ရှားမှုရှိလည်း မအောင်မြင်ဘူး။ အောင်မြင်ထင်ရှားနေပြီဆိုရင်တော့ သေချာပါတယ် သူ ဟာ ကိုယ်ချင်းစာတရားရှိသူ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေ ကိုယ်တွေ ချင်းသာ စာနာ တတ်သူကတော့ လူမုန်းများတတ်ပြီးကိုယ်တွေက အများကို စာနာတတ်မှ သာ လူချစ်လူခင်များတဲ့ အောင်မြင်ထင်ရှားသူအစစ်ပါ။
(၅) သူများရဲ့အရည်အချင်းကို တန်ဖိုးထားတယ်
တကယ့်အောင်မြင်ထင်ရှားသူတွေဟာ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေ တိုးမြင့်နေဖို့ ပဲ ကြိုစား၊ ကိုယ့်အရည်အချင်းကိုဘဲ ကိုယ်အသိအမှတ်ပြုတဲ့တစ်ကိုယ်တော် သမားမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်း ရှိသူ မှန်သမျှကို ချီးမြှင့်အားပေးလိုတဲ့ စိတ်ထားပိုင်ရှင်တွေပါ။
(၆) ဒေါသကို ထိန်းချုပ်နိုင်ကြတယ်
အင်မတန်သိသာတဲ့အချက်ပါ၊ သူတို့ဟာ ဖြစ်ပျက်ကြုံဆုံလာရတဲ့ အကြောင်း အရာမှန်သမျှအပေါ်မှာ သွေးအေးစွာ ဖြေရှင်းနိုင်သူတွေပါ၊ ဒေါသ ထွက်ခဲ့ ရင်တောင် လျင်မြန်စွာ ပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ အသိတရားတွေ ပိုင်ဆိုင် တတ် ကြပါတယ်။ ဒေါသထွက်လွန်းလို့ ရင်တွင်းဆူပွက်နေခဲ့ရင်တောင် သူ့ဒေါသ ကိုသူပဲ အသိခံပြီး ဒေါသကြောင့် အမှားတရားတွေကို ဖန်တီးမယ့် သူမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများအားလုံး ထက်မြက်အောင်မြင်သော သူများဖြစ်နိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုလျက်..............................။
Royal Hero Media တွင်ဖော်ပြသော သတင်းကို မူရင်းအတိုင်းမျှဝေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 12/09/2012 11:21:00 pm0comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကြည့်ရင်မြင်ရင် အသိတရားအမျိူးမျိူးရတယ်..။ တစ်ချက်က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ သူလိုလုပ်တတ်ကိုင်တတ်တဲ့သူ (အဲလိုပဲပြောပါမယ်နော်..။) မရှိသလောက်နည်းတယ်..။ ဒါပေမယ့် ငါမှလုပ်တတ်တယ်..၊ ငါမို့လုပ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနုန်း၊ ဟန်ပန်မူ ယာတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးတဲ့အပြင် တစ်ခြားလူတွေကိုပါ အဲလိုစိတ်မမွေးဖို့ ဆုံးမတာကြားရတယ်..။ အရွယ်ကွာခြားချက်ကြောင့်လား..၊ မွေးရာပါဗီဇကွာတာကြောင့်လားမသိ..။ အဲဒီအချက်ကိုမြင်မိတိုင်း လေးစားပြီးရင်း လေးစားမိရတယ်..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် အင်တာဗျူး မေး။ ။ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတာ ဘယ်အချိန်က စပြီး ခံစား မိတာလဲဆိုတာ သိပါရစေ ခင်ဗျာ။
ဖြေ။ ။ အဲဒီမျိုးချစ်စိတ် ၊ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို သိပ်မပြောချင်ဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဆိုတော့တချို့က မျိုးချစ်စိတ်၊ မျိုးချစ်စိတ်ဆိုပြီး ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လုပ်တာမျိုးကို မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ အကြောင်းပြပြီး မျိုးချစ်စိတ်နဲ့ လုပ်တယ်လို့ ပြောတယ်၊ လူတိုင်းလူတိုင်းက ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ့်အမျိုးအဆွေ ကိုယ့်မောင်နှမသားချင်းတွေကို ချစ်သလို ကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးချစ်တဲ့ စိတ်ကတော့ အမြုတေအားဖြင့်တော့ ရှိနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။ ခုဝတ်ထားတာက ကရင်လုံချည်ပေါ့၊ (ရယ်လျက်)၊ အင်း….ဒီဇိုင်နာ ရယ် လို့ မရှိပါ ဘူး၊ ဒီလိုပဲ ..၊ တချို့တွေကျတော့ သူများတွေ ချုပ်ပြီးပေး လည်း အမေဝတ်တာပဲ၊ သူများပေးတာ ဝတ်တာ များတာပေါ့နော်၊ နောက် ထပ် ကိုယ့်ဟာ ကိုယ်လည်း ဒီလိုပဲ ချုပ်ဝတ်တာပဲ၊ ဒီဇိုင်နာရယ်လို့ တော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဖြေ။ ။ အဲ့ဒါပြောရခက်တယ်၊ စိတ်ဓာတ်ဆိုတာ တစ်မျိုးတည်းမှ မဟုတ် တာဘဲ၊ ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့ စိတ်ဓာတ် က ပြောင်းလဲတာပေါ့၊ ပျော့ပျောင်းသင့်တဲ့ နေရာမှာ ပျော့ပျောင်းတယ်။ တင်းမာသင့်တဲ့နေရာမှာ တင်းမာတယ်၊ အဲဒီတော့ အမေအမြဲပဲပြောတယ် တင်းမာတာမဟုတ်ဘူး၊ခိုင်မာတာပေါ့၊ ပျော့ ပျောင်းတာနဲ့ ပျော့ညံ့တာ မတူဘူး၊ ခိုင်မာတာနဲ့ တင်းမာတာနဲ့ မတူဘူး၊လိုအပ်ရင် လိုအပ်သလိုပေါ့၊ အမြဲပဲ ဒါပျော့ပျောင်းနေ လို့လည်း မရဘူး၊ ပြောရမယ် ဆိုရင် တိုက်ဖို့ လိုရင်လည်း တိုက်ရမှာပဲ၊ ခံဖို့လိုရင် လည်းခံရမှာပဲ၊ချော့ဖို့လိုရင်လည်း ချော့ ရမှာပဲ၊ လျှော့ဖို့လိုရင်လည်း လျှော့ရမှာပဲ(ရယ်လျက်)။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့ မူအရလုပ်သင့် တာတွေ လုပ်နိုင်ဖို့ စိတ်ဓာတ်ကို ပြောင်းသွားရမှာပါ။
ဖြေ။ ။ အဲဒါကတော့ တာဝန်သိစိတ်လို့ပဲ ပြောရ မှာပဲ၊ အမေတို့ ငယ်ငယ် တည်းက မေမေ (ဒေါ်ခင်ကြည်) က အင်မတန်မှ တာဝန်သိတယ်၊ မေ့မေ့ရဲ့ တာဝန်သိစိတ်က အင်မတန်မှလည်း ကြီးတယ်၊ ကလေးတွေကိုလည်း တာဝန်သိစိတ်ရှိဖို့ သင်ထားတယ်။ အဲတော့ ကိုယ့်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ခံစားချက်တွေထက် ကိုယ့်တာဝန်လို့လက်ခံတဲ့ ကိစ္စကို ရှေ့တန်းတင် ရမယ်ဆိုတဲ့ ဟာကိုတော့ ဒါငယ်ငယ်က ပြုစုပျိုးထောင်ထားခဲ့တာပါ။
ဖြေ။ ။မှန်ကန်ခြင်း ဆိုတာကတော့နော်၊ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဘယ်ဟာက မှန်ကန်သလဲ ဆိုတာ တစ်ခါတလေ အငြင်းပွားကြတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့လည်း ဖေဖေပြောခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းဆိုရင်တော့ ကိုယ့်လိပ်ပြာခုံ ရုံးရှေ့မှာ ကိုယ်မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်နိုင်မှ။ မှန်ကန်လား မမှန်ကန်လား ဆိုတာ အဲ့ဒါနဲ့ ဆုံးဖြတ်ရမှာပေါ့၊ ရဲရင့်တယ် ဆိုတာက ကိုယ် မှန်ကန်တဲ့ ကိစ္စအတွက် ထိမယ်ထင်ရင်လည်း၊ နာမယ် ထင်ရင်လည်း ထိမှာ နာမှာကို ရင်ဆိုင်မယ်ဆိုတဲ့ သတ္တိကို ထုတ်တာဟာ ..ဒါ ရဲရင့် တာပေါ့၊
ဖြေ။ ။ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးမှာ ပညာရေး ကတော့ အဓိက အရေးကြီးတယ်။ ပညာရေးကို အခြေခံမှ မှန်ကန်တဲ့ စီးပွားရေး မူတွေ လည်း ချနိုင်မယ်၊ မှန်ကန်တဲ့ စီးပွားရေးလမ်းကိုလည်း လျှောက်နိုင်မယ်။ နောက် ..လူမှုရေးက လည်း ပညာရေးက အများကြီး အကျုံးဝင် တာပေါ့လေ၊ ပညာရေးက မှန်ကန်လို့ရှိရင် မှန်ကန်တဲ့ လူမှုရေး ဆက်ဆံ မှုတွေကလည်း မှန်ကန် လာမှာပေါ့၊ အမေတို့ ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် စိတ်ဓာတ်ကောင်းမွန်ဖို့ ..။ ဒါမျိုးတွေက အများကြီး သင်တာတွေ ရှိတယ်၊ သားတို့ခေတ်မှာ ဒါ တွေက ကျောင်းတွေမှာ သိပ်မသင်ဘူးပေါ့။ အဲတော့ ပညာရေးက စိတ်ဓာတ်မှန်ကန်ဖို့နဲ့ ဆက်စပ်တယ် ဆိုတော့ လူမှုရေးနဲ့လည်း ဆက်စပ်သွားတာပေါ့။
Posted by ကြည်မြန်မာ at 12/07/2012 11:54:00 pm0comments